Dastuurka Puntland oo cod aqlabiyad ah lagu ansixiyey; madaxda dawladda iyo goob joogayaasha oo ka hambalyeeyey meelmarkiisa. – Radio Daljir
Garowe, Apr 18 – Waxaa goordhawayd si rasmi ah u meelmaray dastuurkii cusubaa ee dawladda Puntland kaddib markii maanta ergooyinka aftida u qaadayaasha ah ee Puntland ay cod-aqlabiyad ah ku ogalaadeen dastuurkaasi.
Tirada guud ee ergooyinka ansixinta dastuurka Puntland oo ahayd 480 xubnood, ayaa waxaa codka kalsoonida siiyey dastuurka kuna codeeyey HAA 472 xubnood, halka lix xubnoodna ay codka diidmada ah kala hor-imaadeen, waxaana madashaasi maanta lagu ansixiyey dastuurka ka maqnaa labo ergay oo ka tirsanaa xubnihii laga soo xulay gobolka Sool.
Sacab iyo sawaxan soo dhaweyneed ayaa halmar qabsaday xaruntii codayntu ay ka dhacayoo ah aqalkii wakiillada Puntland, kaddib markii guddoomiyaha guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland Maxamed Xasan Barre Shibiralaaye uu ku dhawaaqay natiijada codbixinta, taasoo wax badan ka sarraysa filashadii codbixineed ee la saadaalinayey.
Madaxda dawladda Puntland oo uu ugu horreeyo madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ‘Faroole’ oo khudbado ka jeediyey madasha lagu meelmariyey dastuurka Puntland ayaa si aan kala har lahayn uga hambalyeeyey codka kalsoonida ah ee lagu ogalaaday dastuurka, iyagoo si gaar ahna ugu mahadceliyey ergooyinka loo xulay aftida, kuwaasi oo ay sheegeen in ay marxalad cusub u tallaabiyeen dadka iyo deegaannada Puntland.
Madaxda dawladdu waxay ku celceliyeen faa’idooyinka dadka reer Puntland uu u horseedi doono dastuurka maanta la ogalaaday, kuwaasi oo iskugu dhafan horukacyo xagga siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha, ammaanka, xuquuqda, sinnaanta, iyo is doorashooyin dadweyne.
“Puntland hadday cagta saartay waddadii xaqa ahayd ee isku doorasho hannaan xor ah oo madax bannaan, dadweynuhuna ay awood u yeelan doonaan ka talinta masiirkooda iyo maslaxaddooda ummadeed, tani waa mid ku dayasho mudan, ergooyinkuna waxay ka taliyeen mastaqbalkii bulshooda, waxaana lagu waari doonaa waqdiiqadaan xalaasha ah” Madaxweynaha Puntland.
Ku-xigeenka R/wasaaraha ahna wasiirka ganacsiga C/wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif oo hoggaaminayey waftiga dawladda federaalka ee ka qaybgalayey shirka ansixinta dastuurka Puntland oo hadal kooban halkaasi ka jeediyey ayaa sheegay dawlad ahaan in ay aad u soo dhaweynayaan sida wanaagsan ee ergooyinka shirku u ansixiyeen dastuur, waxaana uu ku tilmaamay tallaabo horay loo qaada oo wax ku ool ah in ay tahay.
Wakiillo kale duwan oo iyana ka socday waddamada dariska ah iyo hay’adaha Qaramada Midoobay ee Puntland ka hawlgala, oo munaasabadda hadallo kooban ka soo jeediyey ayaa ku macneeyey guul u soo hoyaday ummadde reer Puntland in ay tahay ansixinta dastuurku.
Issimada Puntland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda meelmarinta dastuurkaani ay u lahayd dadka reer Puntland, waxaana ay dawladda u soo jeediyeen hirgalinta hannaanka cusub ee dastuurkaani
qeexayo, iyagoo shacabkana kula taliyey in ay u hoggaansamaan dastuurkaan oo daboolayo baahidooda dhan walba.
Maanta ayay si rasmi ah Puntland uga tallaabtay nidaamkii qabaliga ah oo ay ku dhisnayd muddo ka badan 13 sano, waxaana ay u gudubtay hannaanka axsaabta badan.
Codbixintii aftida dastuurka Puntland oo maanta la qaadi doono iyo madax kale duwan oo ka soo xaadiri doonta madasha
Garowe, Apr 18 – Waxaa maanta lagu wadaa in si rasmi ah loo guda-galo cod u qaadidda dastuurka Puntland kaddib markii saddexdii maalmood ee ugu dambaysay ay ergooyinku ka doodayeen 141-da qodob ee dastuurku uu ka kooban yahay.
Cod u qaadista aftiyeed ee dastuurka, ayaa noqon doonta mid gacan taag ah, iyadoo ergooyinka la siiyey labo akhyaar oo ah HAA iyo MAYA, taasoo midkood haddii codku u bato ka dhigaysa dasuurka mid meelmariyay ama la diiday.
Madaxsha shir weynaha aftida dastuurka Puntland, waxaa maanta ku sugan oo goob joog ka noqon doona habka codbixineed madaxda sarsare ee dawladda Puntland, mas’uuliyiin ka socota dawladda federaalka oo uu ka mid yahay ku-xigeenka R/wasaaraha, wakiillo caalami ah oo ka kala yimid dalalka jaarka ah, hay’adda QM ee gobolka iyo marti sharaf kaleeto.
Dhaqangalka dastuurkaani, waxay dhabba u sii xaaraysaa nidaamka ku dhisan is doorasho xor ah oo ka hana-qaadda deegaannada Puntland, caddaalad iyo sinnaan hannaan maamuleed oo loo gudboon yahay.